NICK PLUM: SHARAXAADA KALA DUWAN, SIFOOYINKA, BEERITAANKA, DARYEELKA IYO SAWIRADA - BEERTA
Naanjiyo kala duwan oo badan iyo midho dhalaalaya "Nika"
Noocyada Nick Plum weli lama faafin, laakiin sanad walba waxay heleysaa wax badan oo caan ah sababtoo ah sifooyinka wanaagsan ee dhirta.
Labadaba waa la wada cuni karaa mid cusub ama waxaa loo isticmaali karaa in lagu sameeyo jajab, ilaalin, iyo casiir leh qashir.
Nick Plum: sharaxaad kala duwan
Wixii darajo ah Nick koritaanka celceliska qiyaasta, iyo mararka qaarkood koritaanka xooggan ee geedaha. Ilaa shan iyo toban sano waxay gaari karaan afar mitir oo dherer ah. Geedku wuxuu leeyahay taajajir balaaran oo qotodheer ah oo ah dhumuc dhexdhexaad ah. Midabka jilicsan ee jirku wuxuu noqon karaa midab madow ama madow-madow.
Waayo, jilifku waa dabeecad xakameyn xooggan iyo joogitaanka dhexdhexaad ah ama adag oo adag. Dhaleeceynta gunta waxaa lagu muujinayaa mid aad u liita ama ma ahan. Geedku wuxuu soo saaraa caleemo la duubay, taas oo ah da 'yar oo is bedeli kara midabkooda iyadoo ku xiran iftiinka.
In qorraxda, waxay leeyihiin midabka casaan-cas, iyo hooska waxay noqdaan cagaar iftiin. Wax yar ka dib, caleemaha waxay helayaan midabka madow-madow. Longitudinal dildilaaca huruud ah-brown soo muuqan iyaga, iyo caleemaha u eegto xargaha. Tani waa muuqaal muuqaal ah oo kala duwan ee Nick.
Caleemaha daaqsinka ah waa kuwo leh qaab dhexdhexaad ah iyo mid dhexdhexaad ah, iyo burooyinkooda dhalaalaya waa kuwo yaryar iyo ukunta-qaabeeya.
Caleenta caleen waxaa lagu gartaa qaab oval ah oo leh fiiq adag.. Saldhigeedu wuxuu noqon karaa mid la mid ah ama qaab-qaabeeya.
Dhererka caleenta caleenta waa caadi ahaan laga bilaabo lix illaa toban sentimitir dhererka iyo afar illaa lix sentimitir oo ballaaran.
Blade wuxuu leeyahay maqaar madow. Laga soo bilaabo kor ku xusan waa mid cagaaran, siman oo iftiin leh, iyo hoos ka hooseeya waa iftiin cagaaran-cagaar ah oo loo yaqaan pubescent iyo xididada.
Blade waxaa lagu kala gooyaa geeso caan ah iyo cillado dhexdhexaad ah.
Geedka noocaan ah, petioles yaryar oo leh laba qaybood oo yar oo bir ah iyo mid aan ku habooneyn midabka midabka maroon anthocyanin waa dabeecad. Inflorescence badanaa waxay ka kooban tahay labo ubax, laakiin waxaa laga yaabaa in mid ama saddex ubax.
Ubax waa dhexdhexaad dhexdhexaad ah iyo qaabka finanka. Waxaa lagu gartaa qurxiyo la isku qurxiyey. Dhererka mashiinka wuxuu ka kooban yahay shan illaa toddoba millimitir, iyo pistil oo leh ugxan-dhadheer waa toban ilaa 12 millimitir.
Noocyada beerta Nick oo ay ku kala duwan yahiin midabyo waaweyn oo aad u liidanmiisaankoodu wuxuu ka bilaabmaa soddon ilaa afartan garaam, laakiin leh dhalid yar ayaa laga yaabaa inay waxoogaa ka badan. Miraha waxaa lagu tilmaamaa mid aan isku dhigmin. marka la eego cirridka caloosha iyo maqnaanshaha ku dhowaad dhammaystiran ee ka soo horjeeda dhinacyada.
Miraha waxay leeyihiin caarad wareegsan, dhexda taas oo ay jirto meel yar oo jeexan, saldhigga ovalaha iyo jilbaha gacmaha. Goobta caloosha waxay leedahay horumar daciif ah mana jabna. In muuqaalka, miraha kala duwan ee tubta Nika u eg Hungarian.
Ugu horreyntii, midhaha ayaa leh diirka cagaaran, taas oo marka u bislaado uu noqdo guduud mugdi ah leh ubax weyn oo buluug ah. Jidhku wuxuu leeyahay midabka jaale-cagaaran, markaad si buuxda u jilciso waxay noqotaa midab jaalle ah..
Wixii miro ah cufnaanta cufnaanta cufan, iyo marka goynayaan, waxay noqdaan jilicsan oo aad u casiir leh. Wixii iyaga dhadhanka macaan oo leh macaan yar yar iyo tinge yar oo tartiib ah. Marka la eego cabirka dhadhanka, miraha ka sameysan noocyada Nika laga helo waxaa lagu qiyaasay 4.3 dhibcood. Miraha waxay ku kala duwan yihiin asaaska dhirta dheer iyo lafta yaryar oo ah qaabka dheeraadka ah iyo ovalaha.
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan noocyada kala duwan ee "Nika" waxaa laga heli karaa sawirka hoose:
Nick Plum cultivar waxaa lagu xannibay xarunta beerta ee tijaabada ah ee Rossosh Zonal. Waxaa la helay A.Ya. Voronchihina adigoo ka gudbaya foomamka isku dhafan. Sanadkii 1994 noocyada noocaan ah waxaa lagu diiwaan geliyey diiwaanka waxaana loo oggol yahay beerashada gobalka Central Black Earth.
Maalmahan, waxaa si tartiib ah u faafa oo waxaa lagu koraa beeraha guriga ee waqooyiga gobolka Rostov, iyo sidoo kale koonfurta magaalada Belgorod iyo Voronezh.
Ubaxyada dhirta ah ee ubaxyada Nika ayaa ka dhacaya xilliga dhexe. Marka la eego noocyada kala duwan waa is-sharixinSidaa darteed, haddii lagu jiro xilliga ubaxyada xaaladaha cimilada aan wax ku biirin duulimaadka cayayaanka, ka dibna beergooyska ayaa laga yaabaa in gebi ahaanba aan qiimo lahayn.
Ninka loo yaqaan 'pollinators' ee loogu talagalay noocyo dabacsan Nika ayaa loo yaqaan: Bilowga Donetsk, Hungarian, Renklod Soviet iyo Hungarian Donetsk.
Xayawaanka dhirbaaxa ee dhirtu waxay ka bilaabataa sannadka afraad ama shanaad waxayna leeyihiin skoroplodnost wanaagsan. Miraha bislaadaan bisha Agoosto. Waxsoosaarku aad ayuu u sarreeyaa - ilaa soddon iyo shan kiilo oo miro ah ayaa laga goyn karaa hal geed, laakiin waxaa jiray xaalado marka dalagga uu laba jibbaar ka sarreeyey sida tan.
Geedahan waxay u dulqaadanayaan jiilaalka, laakiin ubbooyinku waxay leeyihiin difaaca barafaysan oo daciif ah. Miraha of tubta darajo ah Nick oo lagu garto gaadiidka wanaagsan iyo kala-go'idda aadka u fiican ee dhagaxa ka soo.
Si loo beerto geedaha suufka ee Nika kala duwan, mid waa inuu doortaa ciid ah qoyaan-qoyan, halkaasoo heerka biyuhu aanu ka badnayn laba mitir.
Waqtiga ugu wanaagsan ee beerto waa guga, laakiin haddii aad iibsato sabiib ah xilliga dayrta, markaa waxaad u baahan tahay prikopat iyo dabooli laamo geedo, iyo bilawga jiilaalka si ay daboolaan barafka.
Marka barafku dhalaalaan, geedo u baahan yihiin in la kormeero dhaawaca jiirka iyo burbur faleed. Waa lagama maarmaan in la qodo siddeed ka hor intaan la beeri.
Waxaa ugu wanaagsan in la koro Nike noocyada kala duwan ee meelaha si fiican u iftiimaya qorraxda, kuwaas oo si fiican looga ilaaliyo dabayl xoog leh oo qabow. Waxaad dhali kartaa dhirta dusheeda, laakiin kaliya dhinaca qorraxda.
MUHIIM! Haddii dhirta dhaadheer ay ku koraan goobtaada, markaa waa lagama maarmaan in la beero tubta koonfureed ee iyaga ka mid ah si aanay u tuurin hooska.
Qodobbada loogu talagalay beeritaanka tubta ayaa la diyaarin karaa xilliga dayrta ama horraanta gu'ga, qiyaastii dhowr toddobaad. Qoto dheer ee godadka waa inay ahaataa afartan shan ilaa konton mitir, oo dhexroorku waa inuu ka yimaadaa lixdan ilaa toddobaatan mitir. Godadka qodidda waxay ubaahan yihiin meel fogaan ah saddex mitir oo midba midka kale ah.
Ciidda qoday godka waa in lagu qasi karaa humus 2: 1. Ka hor inta aan la beeri, waa lagama maarmaan in la jeexo qoyan oo ku taal bartamaha ceelka oo ka sameysma bakeeriga ciidda diyaarisay ee ku wareegsan. Qiyaasahaas waxaad ku dhex jiri kartaa nidaamka xididka.
On dhanka waqooyiga ee peg, waa inaad ku rakibaan seedling tubta, ka dibna buuxi ceel si ay beerto dhulka, si joogto ah ruxaya seedling si aanay jirin khilaafaad u dhexeeya xididada. Marka ciidda lagu shubo, waa in la tamped hoos ula gacan gacan. Hubi in dhogorta ay si cad u taagan tahay.
Kadib markaad beerto, samee rilin agagaarka geedka oo ka soo bax dhulka. Waayo, hal geed waxay noqon doontaa laba ama saddex baaldiyo oo ku filan. Ka dib marka biyaha la nuugo, ciidda waa in la kariyaa. Qalabaynta waa in lagu xiraa jeexjeex leh xadhig jilicsan.
Daryeelka noocyada kala duwan ee nickka ayaa ah mid aan ka duwaneynin daryeelida geedo kale oo khudrad ah, si kastaba ha ahaatee dareen gaar ah waa in la siiyaa qoyaan-jecel.
Xilliga cimilada qalalan, waxaa lagama maarmaan ah in la cabo tubta bisha Juun iyo Julaay. ka dibna - maalmaha ugu dambeeya ee Sebtembar.
Habka ugu wanaagsan ee waraabinta waa waraabiyo xididka, iyadoo la isticmaalayo rakibid waraabineed oo gaar ah.
Wixii waraabinta waa in biyaha kululeeyo kuleylka qorraxda.
Bacriminta ugu fiican ee plomme waa magnesium., sidaas darteed, ka hor beerashada dayrta dayrta, waa inaad iyaga u isticmaashid iyaga oo leh bacriminta fosfateerka.
Qiyaastii boqol garaam oo ah superfosphate double iyo potassium magnesia waa in lagu daraa geed kasta.
Guga hore, waxaad kobcin kartaa ciidda iyo Bacriminta nitrogen. Xilliga xagaaga, bacarimis faleebo shimbir ama lo'da digir ayaa la fuliyaa. Dharka ugu sareeya waxaa badanaa la siiyaa isla markiiba ka dib marka geedku billaabayo inuu ubaxu dhaco, iyo laba ama saddex toddobaad ka dib oo kale ayaa la siiyaa.
Marka geedku gaaro laba ama saddex sano jir, caleemo badan ayaa u muuqda, taas oo u baahan in la gaabiyo si loo samaysto taajka saxda ah. Caleemaha saaran waa in laga saaraa xaalad cagaaran. Waa in aynaan ilaawin ka saarista caleemaha asalka ah. Waxaa lagama maarmaan ah in la fuliyo nidaamkan afar jeer xiliga xagaaga.
Noocyada Nick ee noocyada wuxuu leeyahay iska caabin aad u xoog badan oo cudurada fungal ah. Midna monilioz, ama polystigmoz, ama klyasterosporioz geedka ma aha mid cabsi badan.
Si loo ilaaliyo midhaha dabaysha pheromone gaar ah waxaa loo isticmaali karaa aboor ku ah aboor ku dhawaaqaytaas oo ciribtiri doonta ragga cayayaankaan. Laakiin haddii cayayaanku lagu arkay tiro balaaran, ka dibna habka ugu waxtarka leh ee looga takhalusi karo waxay noqonaysaa maaddada insecticidal.
Marka ugu horeysa waa in la fuliyaa dhamaadka May, iyo ugu dambeyntii - aan ka yareyn bil ka hor goosashada. Wareegga u dhaxeeya buufinta waa inuu ahaadaa ugu yaraan laba toddobaad.
Nidaamka xaraashka ah ee Nick wuxuu leeyahay faa'iidooyin gaar ah iyo qaar faa'ido u leh. Faa'iidooyinka ugu waaweyn Kala duwanaantu waa caabbinta barafka wanaagsan, dhalidda sare iyo sifooyinka wanaagsan ee macaamiisha ee midhaha. Waa hagaag, si fiican mid ka mid ah cilladaha ugu weyn waxaa lagu magacaabi karaa dhalid aan caadi ahayn, kaas oo aad si aad ah ula qabsan karto pollinators.